UV510A စီးရီး Full HD PTZ ကင်မရာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Minrray
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > FHD PTZ ကင်မရာ > UV510A စီးရီး Full HD PTZ ကင်မရာ
UV510A စီးရီး Full HD PTZ ကင်မရာသည်ပြီးပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်။ စွမ်းဆောင်ချက်များတွင်ခိုင်မာသောအနက်၊ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုနှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရောင်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသောကြည်လင်သောပုံရိပ်များကိုထောက်ပံ့ရန်အဆင့်မြင့်သော ISP အပြောင်းအလဲဆိုင်ရာ algorithms များပါဝင်သည်။ ၎င်းသည် H.264 / H.265 encoding ကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်စံနမူနာ bandwidth အခြေအနေထက်တောင်မှလှုပ်ရှားမှုဗီဒီယိုကိုရှင်းလင်းစွာနှင့်ရှင်းလင်းစေသည်။
The UV510A စီးရီး Full HD PTZ ကင်မရာ offers perfect functions, superior performance and rich interfaces. The features include advanced ISP processing algorithms to provide vivid images withastrong sense of depth, high resolution, and fantastic color rendition. It supports H.264/H.265 encoding which makes motion video fluent and clear even under less than ideal bandwidth conditions.
UV510A တွင် ၁ / ၂.၈ လက်မအရည်အသွေးမြင့် CMOS အာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ထားသည်။ Resolution သည် 1920x1080 အထိရှိပြီး frame rate 60fps အထိရှိသည်။
Optical Zoom မှန်ဘီလူး
ရွေးချယ်စရာများအတွက် 5X, 10x, 12X, 20X, 30X နှင့်အခြား optical zoom မှန်ဘီလူး။ မှန်ဘီလူးသည် ၈၃.၇ ဒီဂရီအကျယ်ထောင့်ကိုပုံပျက်စရာမလိုပဲအသုံးပြုသည်။
.Trinity image auto-focusing technology
Auto အာရုံစူးစိုက် နည်းပညာကိုဖတ်ရှုခြင်း
ဦး ဆောင်နေသည့် auto focus algorithm သည်မှန်ဘီလူးကိုမြန်သော၊ တိကျ။ တည်ငြိမ်သော auto-focus လုပ်စေသည်။
.Low ဆူညံသံနှင့်အမြင့် SNR
Noise Noise CMOS သည်ကင်မရာဗွီဒီယိုများ၏မြင့်မားသော SNR ကိုထိရောက်စွာသေချာစေသည်။ အဆင့်မြင့် 2D / 3D ဆူညံမှုလျော့ချရေးနည်းပညာကိုလည်းပုံရိပ်ပြတ်သားမှုကိုသေချာစေပြီးဆူညံသံကိုထပ်မံလျှော့ချရန်လည်းအသုံးပြုသည်။
.Multiple အသံ output ကို Interfaces
HDMI, SDI, USB, Wired LAN, Wireless LAN (5G WiFi module နှင့် POE optional) ကိုထောက်ပံ့နိုင်သည်။ SDI သည် 1080P60 format ဖြင့်မီတာ ၁၀၀ ထုတ်လွှင့်ရန်အထောက်အကူပြုသည်။
ပံ့ပိုးမှု 8000, 16000, 32000, 44100, 48000 နမူနာကြိမ်နှုန်းနှင့် AAC, MP3, G.711A အသံ coding ။
အသံ / ဗီဒီယိုချို့တဲ့မှုများစွာ
ပံ့ပိုးမှု H.264 / H.265 ဗီဒီယိုချုံ့; AAC, MP3 နှင့် G.711A အသံချုံ့မှု၊ resolution ကို 1920x1080 အထိ frame ကို 60fps အထိထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
ONVIF, GB / T28181, RTSP, RTMP protocols များကိုထောက်ပံ့ပြီး streaming media server (Wowza, FMS), RTP multicast mode နဲ့ network command အပြည့် VISCA control protocol ကိုချိတ်ဆက်ရန်လွယ်ကူသော RTMP push mode ကိုထောက်ပံ့ပါ။
.Multiple ထိန်းချုပ်မှု interface ကို
RS485, RS232 ။ RS232 သည်တပ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသော cascade function ကိုထောက်ပံ့သည်။
VISCA, PELCO-D, PELCO-P protocols များနှင့်အလိုအလျောက်မှတ်ပုံတင်ခြင်း protocol ကိုထောက်ပံ့ပါ။
အလွန်အေးဆေးတည်ငြိမ်သော PTZ .Extremely
အဆင့်မြင့်မောင်းနှင်သည့်မော်တာယန္တရားနှင့်မော်တာ drive ကိုထိန်းချုပ်သူအားတိကျမှန်ကန်စွာလက်ခံခြင်းသည် PTZ သည်အမြန်နှုန်းနှင့်ဆူညံသံမရှိဘဲချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေရန်ဖြစ်သည်။
.Low- ပါဝါအိပ်စက်ခြင်း function ကို
အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အိပ်ခြင်းအားဖြင့်အနိမ့်စွမ်းအင်ကိုထောက်ပံ့သည်၊ အိပ်စက်ခြင်း mode တွင်စားသုံးမှုသည် 400mW ထက်နည်းသည်။
.Multiple Remote Controller
၁ / ၂.၈ လက်မအရည်အသွေးမြင့် HD CMOS အာရုံခံကိရိယာ
16: 9,2.07 megapixel
HDMI / SDI / HDBaseT ဗွီဒီယိုအမျိုးအစား
U3 interface ဗီဒီယိုအမျိုးအစား:
U2 နှင့်သဟဇာတဖြစ်သော 2) U3: 960X540P30; 640X360P30; 1280X720P10 / 15; 720X576P50; 720X480P60; 640X480P30; 352X288P30; 800X600P30 ။
၂၀ ° (တယ်လီဖုန်း) - ၈၃.၇ ° (အကျယ်)
၆.၄၃ ° (တယ်လီဖုန်း) - ၆၀.၉ ° (အကျယ်)
၆.၃ ° (တယ်လီဖုန်း) - ၇၂.၅ ° (အကျယ်)
၃.၃ ° (တယ်လီဖုန်း) - ၅၄.၇ ° (အကျယ်)
၂.၃၄ ° (တယ်လီဖုန်း) - ၆၅.၁ ဒီဂရီ (အကျယ်)
အော်တို / လက်စွဲ / OnePush / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K
အော်တို / လက်စွဲ / တ ဦး တည်းတွန်းအားပေးအာရုံ
အော်တို / လက်စွဲ
UV510A-ST ပုံစံ: SDI, HDMI, LAN, RS232 (input & output)၊ RS485, A-IN, NDI (optional)
UV510A-U2 ပုံစံ: USB2.0၊ LAN၊ RS232 (input & output)၊ A-IN
UV510A-U3 ပုံစံ: USB3.0, LAN, RS232 (input & output)၊ A-IN
UV510A-HD ပုံစံ - HDBaseT (POE), LAN, A-IN, RS232 (input)
UV510A-HM ပုံစံ: HDMI, LAN, RS232 (input)
UV510A-U2U3 ပုံစံ: USB2.0, USB3.0, HDMI, LAN, RS232 (input)
UV510A-RF model: WiFi (RF), LAN
HDMI, SDI, LAN (ရွေးချယ်စရာများအတွက် POE), USB3.0, USB2.0
နှစ်ဆစီး output ကို
A-IN: နှစ်ဆလမ်းကြောင်း ၃.၅ မီလီမီတာ linearinput
100M IPport (100BASE-TX), 5G WiFi (optional)
RTMPS, RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, Network VISCA Control Protocol ကို, Support remote upgrade, reboot and reset.
RS232 (input & output ကို), RS485
HEC3800 ထွက်ပေါက် (DC12V)၊ 2pinwaterproof aerial socket (RF model)
input: AC110V-AC220V; output: DC12V / 1.5A
RF parameter သည်
၅.၁” ၅.၉ (GHz)
‰ ၃၀၀ မီတာ (အပြင်ဘက်တွင်ပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပဲ)၊ ၁၅၀ မီတာ (အိမ်တွင်းပိတ်ဆို့ခြင်းမရှိပဲ)
Max 300Mbps (ထုတ်လွှင့်မှုအကွာအဝေးနှင့် channeloccupancy အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်)
လက်စွဲစာအုပ် / အလိုအလျောက်ရုပ်သံလိုင်း mode ကိုရွေးချယ်ရေး
0.1 -60 ° / sec
ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှု ၂၅၅ ခု (ကြိုတင်ထိန်းချုပ်မှု ၁၀ ​​ခုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါသည်)
150mm × 150mm × 167.5mm
ပါဝါထောက်ပံ့မှု၊ RS232 ထိန်းချုပ်သောကေဘယ်၊ USB3.0 ဆက်သွယ်မှုကေဘယ် (U3 ပုံစံ)၊ USB2.0 ဆက်သွယ်မှုကေဘယ် (U2 ပုံစံ)၊ အဝေးထိန်းခလုတ်၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ
မျက်နှာကျက် / Wall Mount (အပိုဆောင်းကုန်ကျစရိတ်)
hot Tags:: UV510A စီးရီး Full HD PTZ ကင်မရာ၊ ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများသိုလှောင်ထားသော, လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း, တရုတ်, လျှော့စျေး, စျေးအနိမ့်, နောက်ဆုံးပေါ်၊ အဆင့်မြင့်၊